CAF Champions League Archives - Impempe
‘Kumele sibhudluze iSuperSport ngo 5-0 ukuze sibuyele kwiCaf,’ kusho owePirates
UKaizer Junior uveza okwenze akangeza uyise kwethulwa uZwane
UMacuphu uthi bazoyivalela ngaphandle kwiCaf iPirates
Ngabe ihlekisana ihlomelene kubaqeqeshi beSundowns?
Ngazalelwa ukwenza kona lokhu, kusho uZwane weChiefs
Kufezeke isifiso sabalandeli iChiefs iqasha uZwane
Ilole abalandeli iChiefs iveza ukuthi izomemezela izinguquko
May 20, 2022 Impempe.com
OkaDonga Gumbi Kubhedile. Lena yiyona kuphela indlela yokuchaza inqina kamabuyaze ehanjwe yi-Orlando Pirates eNigeria la beyidlala khona umdlalo wamanqamu kwiCaf Confederation Cup ngoLwesihlanu kusihlwa. IPirates ishaywe ngo 5-4 yiRS Berkane kulo mdlalo obuseGodswill Akpabio Stadium […]
Leave a commentCAF Champions League, Ezakamuva, Ibhola lomhlaba, iDStv Premiership
OkaDonga Gumbi U-Arthu Zwane ufanise abaqeqeshi be-Orlando Pirates oMandla Ncikazi noFadlu Davids namavulandlela azophenduka isibuko la abanye abaqeqeshi baluleli okuzomele bazibuke khona. ONcikazi noDavids bazohola iPirates uma seyidlala emdlalweni wamanqamu kwiCaf Confederation Cup eGodswill Akpabio […]
May 19, 2022 May 19, 2022 Impempe.com
OkaDonga Gumbi UDeon Hotto usengelinye lamasosha athenjiwe enkambini ye-Orlando Pirates yize eseneminyaka emibili nje efikile kuleli qembu laseSoweto. Lo mdlali odabuka eNamibia akapheli moya futhi uhlezi ezinikele elwela iqembu ukuba liwine futhi useyisizile iPirates emidlalweni […]
May 18, 2022 Impempe.com
OkaDonga Gumbi I-Orlando Pirates ilindele ukuthola abalandeli abazoyeseka e-Uyo, eNigeria ngenxa yokuthi ibophele u-Olisa Ndah obedlala kule nkundla ezodlala kuyo umdlalo wamanqamu kwiCaf Confederation Cup ngoLwesihlanu. Lokhu kuvezwe umqeqeshi zeZimnyama uFadlu Davids ngesikhathi ekhuluma nabezindaba […]
Leave a commentCAF Champions League, Ezakamuva, iDStv Premiership
U-Ofori ufuna basule izinyembezi zabalandeli ngeseConfed Cup
May 17, 2022 Impempe.com
OkaDonga Gumbi Unozinti we-Orlando Pirates uRichard Ofori ubuye ekulimaleni sewuphakathi umqhudelwano weCaf Confederation Cup, kodwa ube nesandla ekutheni leli qembu lifike kowamanqamu. Amabhakhaniya azogadulisana neRS Berkane yaseMorocco eGodswill Akpabio Stadium ngoLwesihlanu ebusuku. U-Ofori ukholwa wukuthi […]